Munamato Unobudirira | MINYENGETERO MARI
Chitatu, September 15, 2021
musha Munyengetero Munamato Unobudirira
24 Naizvozvo ndinoti kwamuri: Zvinhu chero zvamuchashuwira, kana muchinyengetera, tendai kuti muchagamuchira, uye muchava nazvo.
Munyengetero inogona kutsanangurwa sekutaurirana kwakananga naMwari nekutenda, zvine chekuita nenyaya dzehupenyu hwako. Munamato ndiyo svikiro inotibatanidza neyemashura. Kuburikidza nemunamato tinotaurira Mwari nezve nyaya dzehupenyu hwedu dzinotinetsa. Munamato hausi wekukumbira zvinodiwa chete, tinorumbidzawo Mwari kuburikidza nemunamato, isu tinomunamatira kuburikidza nemunamato. Sevatendi muna Kirisito, tinofanirwa kunzwisisa kuti hatishumire Mwari vanochengeta minamato, asi isu tinoshumira Mwari vanopindura minamato. Mwari anonzwa minamato yedu, uye kana tikanyengetera kwaari nokutenda, anotipindura.
Munamato ndechimwe chezvinhu zvikuru zvevakadzikinurwa. Ihwo hukama hwedu hwekutaurirana naMwari, Baba vedu vekudenga. Nehurombo, zvakadaro, vazhinji vari kunge vasiri kutora mukana weiyi ropafadzo kana kuti vanosvika nenzira isiriyo. Hazvishamisi kuti unovanzwa vachiti, "Ndanga ndichinamata kwemwedzi ikozvino, uye zvakadaro hapana mhinduro kubva kuna Mwari." James 4: 2-3 inotitaurira chikonzero chekutadza kwavo: Munochiva, asi hamuna; munouraya, munoshuva kuva, asi hamugoni kuwana; munorwa nekurwa, asi hamuna, nekuti hamukumbire; munokumbira, asi hamugamuchire, nekuti munokumbira zvisirizvo…
Kusvikira iwe waziva izvo zvinorehwa nemunamato uye nekunyengetera nemazvo, hauzombove wakasununguka pakumanikidzwa.
Kuti minamato yako ipindurwe, unofanirwa kusvika minamato uine maitiro akakodzera. Pane nzira chaiyo yekunyengetera nguva dzose. Uye kana iwe uchitevera iyi nzira chaiyo, minamato yako haigoni kutiza mhinduro pakarepo. Mateo 6: 9-13, Jesu akatipa muenzaniso wemunyengetero unochinja. Tinozvidaidza munamato waIshe. Kuti uzive zvakawanda nezvenzira yekunamata uchishandisa munamato waIshe munamato ndapota baya pano. Ukadzidza munamato waIshe, uchaona kuti munamato wese unofanira kutanga nawo zvokuvonga, tinofanira kubvuma ukuru hwaMwari pamusoro pemamiriro edu, kechipiri tinofanirwa kuziva uye nekunamatira kuti humambo hwaMwari huve nesimba munyika yedu. Kunamatira humambo kunamatira kuti vhangeri riitore pasi rose, nekudaro rinotungamira kuruponeso rwemweya pasi rese, chetatu isu izvozvi taura zvikumbiro zvedu pachedu kunaIshe, tinofanira kuve takananga muminamato yedu, tichiudza Ishe chii tinoda Iye kuti aite muhupenyu hwedu, chechina, tinofanirawo kunamatira ngoni, pachedu nepamusoro peavo vakatitadzira, tinofanira kudzidza muminamato yekuregerera kunyange sekuregerera kwakaita Kristu, pakupedzisira tinopedza minamato yedu na kuvonga, kuonga Mwari nekupindura minamato yedu. Ziva kuti pasina kutenda kwako kuri munzvimbo, mhinduro dzeminamato yako hadzitarise. Iwe unofanirwa kunyengetera uchitenda kuti icho chaunokumbira uchagashira.
Munamato haidi kumwe kurapwa kudenga kupfuura mhinduro. Mwari haana bhuku rekodhi reminamato, uye Iye haana kana chitoro chavo. Ivo vanopindurwa kana kudzoserwa kune vanotumira. Ndicho chikonzero vazhinji vasina kumbobvira vapiwa mhinduro kuminamato yavo. Asi kubva zvino zvichienda mberi, ndiri kukuona uchishandisa chishamiso chemunamato nhungamiro, kuti nguva dzese dzaunomira pamberi paMwari mumunamato ugogara uchigamuchira mhinduro.
Munamato mweya wekufema. Sezvakangoita hukama hwese hwakasimba parunogadzirisa hukama hwakanaka kwazvo hwekudyidzana pakati pemapato anopindirana, munamato haungoshande senzira yekuita kuti Mwari apindire muzvinhu zvedu, unosimbisa kusimba kwehukama hwedu naye, nekuti ndomumwe. nezvenzira dzatinodyidzana Naye. Munamato hausarudzwe kumutendi nekuti nderimwe remabasa edu esungano. Ndokusaka Izwi raMwari richiraira kuti isu tinamate nguva dzose, Ruka 18: 1, 1 VaTesaronika 5:17
Munamato isimba rine simba rekuchinja muhupenyu hwemutendi. Nemunamato, tinogona kuchinja zvinhu zvese. Munamato ndiyo chete nzira iyo kristu anogadzira uye kuburitsa simba. Kana iwe uchida kuona simba raMwari richishanda, namata, kana iwe uchida kuramba dhiabhori, nyengetera, kana iwe uchida kukurira masimba matunhu uye masimba erima, nyengetera, kana iwe uchida kunakidzwa nehumwari utano uye nezvizere, namata, kana uchida kuona kukura mune zvokunamata, nyengetera, kana iwe uchida kuzadzwa ne Mweya mutsvene , nyengetera. Munamato ndiwo musimboti wesimba.
Mukristu wese anonamata anogara achimanikidza dhiabhori nevamiriri vake. Mubhuku raMapisarema 68: 1, shoko raMwari rakati, "Mwari ngaasimuke uye vavengi vake ngavaparadzirwe" ichokwadi ndechekuti Mwari ava havazomuke musituation yako, kusvika iwe Simuka muminamato. Mwari wedu ndiMwari wemitemo, haapindire muhupenyu hwako kusvika iwe wadeedza kwaari nekutenda, Iye ari Mwari wese, asi kuvapo kwake kwakaratidzwa kunoonekwa uye kuziva kwaakadaidzirwa mumunamato, munamato wekutenda. . Munamato chombo chekuparadza vakawanda muruoko rwemutendi, kana iwe uri munamati wechiKristu, uri njodzi kuna dhiabhori neumambo hwerima. Naizvozvo ndinokuraira nhasi, chero zviri muhupenyu hwako izvo dhiabhori ari kurwisana newe pamusoro, chero zvauri kupfuura nhasi, ndinokukurudzira kuti umuke muminamato, tsiura dhiabhori uye umudzinge kubva muhupenyu hwako uye nemhuri. narinhi muzita raJesu. Pano pa zuvaprayerguide, isu tine simba minamato yemunamato inogona kukubatsira kuhwina hondo yezvokunamata izvo zvinokupa iwe simba pamusoro padhiabhori.
8 Kubatsira Kwemunamato.
Isu tinenge tichitarisa gumi pamubatsiro wemunamato, izvo mutendi anomira kuti abatsirwe, kana akazvipira kumararamiro eminamato.
1). Rubatsiro Runobva Kumusoro:
Mapisarema 121: 1-2:
1 Ndichasimudzira meso angu kumakomo, rubatsiro rwangu runobvepi. Kubatsirwa kwangu kunobva kuna She, iye akaita kudenga napasi.
Minamato inotipa rubatsiro kubva kumusoro. Kana tichinamata, tinoshevedza kumauto eDenga kuti vauye kuzotinunura. Hapana anogona kubudirira muhupenyu pasina rubatsiro, hapana mukristu anogona kuzviita muhupenyu pasina minamato. Minamato ndiyo yekukurumidza uye yechokwadi nzira yatinogona kuchengetedza Rubatsiro kubva kuna Mwari, uye kana Mwari vari kukubatsira, hapana murume anogona kukumisa muhupenyu.
2). Tsvaga Ngoni:
Vahebheru 4: 16:
16 Ngatisvikei tisingatyi kuchigaro choushe chenyasha, kuti tigone kuwana tsitsi, tiwane nyasha yekubatsira munguva yekushaiwa.
Paartari yemunamato, tinowana tsitsi, tsitsi dzaMwari hadzipere, asi dzinongogashirwa paatari yeminamato. Kana iwe uchida kuramba uchinakidzwa nerudo rwaMwari uye nengoni dzake nyoro, idzo nyowani mangwanani ega ega, gara uchimunongedza muminamato. Gara uchishandisa nguva yakakodzera kuna Mwari pamberi pake uye nokunaka kwake uye nengoni zvicharamba zvichikutevera mazuva ese ehupenyu hwako. Nguva dzese dzatinouya kuchigaro cheushe chaMwari muminamato, tsitsi dzake nenyasha dzinogara dziripo kwatiri. Ini ndinonamatira iwe nhasi, kuti hupenyu hwako hwekunamatira haumbofa wakapera muzita raJesu.
3). Ngirozi Kupindira:
Mabasa 12: 5-11:
5 Naizvozvo Petro wakachengetwa mutirongo; asi munyengetero waiitwa kunze kwekereke kuna Mwari uchiitirwa iye. 6 Zvino Herodhe wakati achida kumuburitsa, usiku ihwohwo Petro akange avete pakati pevarwi vaviri, akasungwa nengetani mbiri; uye varindi pamberi pemusuwo vakachengeta jeri. 7 Zvino tarira, mutumwa waIshe wakauya pamusoro pake, nemwenje unopenya mutirongo, akarova Petro parutivi, akamumutsa, achiti: Simuka nekukurumidza. Uye ngetani dzakawa kubva pamaoko ake. 8 Zvino mutumwa wakati kwaari: Zvisunge chiuno, uye sunga manyatera ako. Uye akaita saizvozvo. Zvino akati kwaari: Kanda jasi rako shure kwako, unditevere. 9 Zvino wakabuda akamutevera; uye musina kuziva kuti ichokwadi chakaitwa nemutumwa; asi akafunga kuti akaona chiratidzo. 10 Zvino vakati vapfuura vekutanga nevechipiri, vakasvika pasuwo resimbi rinotungamira kuguta; iyo yakavazarukira iye oga; ndokubuda, vakapfuura nenzira yemumugwagwa. ipapo mutumwa akabva kwaari. 11 Zvino wakati apengenuka, akati: Ikozvino ndaziva chokwadi, kuti Ishe watuma mutumwa wake, uye wandisunungura paruoko rwaHerodhe, nepatarisiro yose yevanhu vevaJudha.
Mhinduro kuminamato yedu zvinowanzounzwa kwatiri nemaNgirozi.Pose patinonamata, ngirozi goto dzinoshanda nekukasira. Minamato sezviri pachena ndiyo nzira yechokwadi yekuona kupindira kwengirozi. Ngirozi dzaIshe zvisikwa zvinopisa, zvine simba, zvine njodzi uye hazvigone kumiswa, kana isu tikanamata kuna She pamusoro penyaya dzipi nedzipi dzinotitenderedza, vatumwa vaIshe vanopinda zviito nekukasira. Kwese pamusoro pebhaibheri, tinoona kupindira kwengirozi semhedzisiro yeminamato, pazasi pane mimwe mienzaniso:
i) Peter, Mabasa 12: 5-8.
ii) Kornerio. Mabasa 10: 3
iii). Hezekia. 2 Madzimambo 19:35
iv) Danieri. Danieri 10:13
v). Jacob. Genesisi 32: 22-31.
4). Kununurwa Kubva Kune Matambudziko:
13 Kune mumwe unotambudzika pakati pako here? ngaanamate. Kune chero mufaro here? ngaaimbe Mapisarema.
Tinokurudzirwa mumagwaro kuti tinamate patinenge tichitambudzika. Kune umwe unotambudzika pakati penyu here? ngaanyengetere. Kwete, “… ngaacheme…”, kana, “ngaaone…” Izvi zvinoreva kuti chero munhu akarohwa, anotambudzwa kana kushushikana anotarisirwa kunamatira kununurwa. Kana iwe uchida kuona iro joko pahupenyu hwako rakaputswa, iwe unofanirwa kunamata. Kana iwe uchida kuti masimba anovharidzira ramangwana rako aputswe, munamato ndiro simba rehumambo rinokurudzirwa kununurwa kwako.
Iwe hauna kuberekwa nekuda kwekutambudzika; iwe wakasikirwa kuratidza kubwinya kwaMwari, uye munamato ndizvo zvinotora kukurudzira kuratidzwa kwako. Munamato ndizvo zvaunoshandisa kuti uzvisunungure kubva kumatambudziko ese emuvengi uye nekudzoreredzwa kwerunako rwako muna Kristu. Hana paakanetseka nekushaya mbereko, akaenda kutemberi akanamata. Mwari vakamunzwa uye vakamupa mwanakomana (1 Sam 1: 9-20). Naizvozvo kutambudzika kupi nokupi kwakaiswa nadhiabhori mumuviri wako, simuka unamate kuna Jesu muzita raJesu
5). Kuzadzika Kwezviporofita:
1 Timoti 1: 18:
18 Uyu murairo, ndinokupa, iwe mwanakomana, Timoti, maererano nezviporofita zvakatanga kuitika pamusoro pako, kuti nazvo urwe kurwa kwakanaka;
Kunamata kurwa inzira yechokwadi yekuzadzikiswa kwechiporofita. Kana iwe uchida kuona zviporofita zvichizadzikiswa muhupenyu hwako, unofanirwa kurwa hondo yemweya. Iwe unofanirwa kunamatira nzira yako mukuzadzikiswa kwechiporofita. Izvo Mwari vakati hazvireve kuti iwe enda unorara, maKristu mazhinji atambisa, vachimirira maporofita kuti azadzikiswe. Haumiriri zviporofita, unomhanya nezviporofita, uye unomhanya sei nemaporofita, kuburikidza neminamato. Unofanira kuramba uchinamatira kusimbiswa kweshoko raMwari muhupenyu hwako kuitira kuti urione richizadzikiswa.
6). Kutungamirirwa Namwari:
Mapisarema 16: 11:
11 Ndiratidzei nzira yeupenyu; Mufaro wake uzere nemwi. kuruoko rwenyu rwerudyi kune zvinofadza narinhi.
Kutungamira kwaMwari inhaka yevakadzikunurwa. Asi iwe unofanirwa kuzvitsvaga kuti unakirwe nazvo. Paunowana nzira yehupenyu, unonakidzwa nekuzara kwemufaro uye mafaro nekusingaperi. Asi zvinongowanikwa pamberi paMwari, chinova ndicho chinangwa chedu chikuru mukunamata. Kuburikidza neminamato, tinokwanisa kukumbira Mwari kuti vatiratidze gwara ravanoda kuti titore muhupenyu. Kunamata ndiyo nzira yechokwadi yekutsvaga chinangwa chako muhupenyu. Mwari ndiye musiki wako, Iye ndiye mugadziri uye hapana anoziva chinangwa chechigadzirwa chiri nani kupfuura iye Mugadziri Pachezvake, saka kana iwe uchida kuziva nzira yawakasikwa kuti utevedze muhupenyu, kana iwe uchida kutsvaga chinangwa chako muhupenyu, kutanga uye kune vakawanda goto musiki wako muminamato. Kumbira Ishe kuti akutungamirire.
Kana Mwari akutungamira, haugone asi kuve wakatanhamara muhupenyu. Vamwe vanhu havana kuitirwa bhizinesi, asi vakasarudza kuzviita, kungave nekuda kwesimba revanhu kana rudo rwevanhu. Vamwe vari mumhando dzese dzehunyanzvi uko nyeredzi yavo isingatombo penya, nekuti havana kuwana nzira kwayo. Vanongoramba vachitsvanzvadzira. Asi iwe haugone kuenda kuburikidza nehupenyu uchiita izvo zvinoita sezvakanaka kwauri. Kune ngozi zvikuru! Rega Mwari akutungamire nhasi, uye nzira yako ichagara iri kupenya.
Kutsveneswa zvinoreva kuverengerwa hupenyu hutsvene. Kana iwe uchirarama hupenyu hwekunamata, iwe unorarama hupenyu hwakanatsa. Iwe haugone kushandisa yemhando nguva nguva dzose naMwari uye zvakadaro ugare wakasununguka nezvivi. Munamato unotibatsira kuvaka kugona kwemweya kurarama hupenyu hutsvene. Kunyanya patinonamata, patinonyanya kuva vatsvene uye patinowedzera kuva vatsvene, tinonyanya kuita saKristu isu.
Basa reIzwi Mukunyengetera
Kunamata pasina izwi raMwari, kuri kungopa kutaura pasina chinhu. Iri izwi raMwari muminamato yako rinopa minamato yako simba rekurayira mhinduro. Mwari haapinduri kumutauro wechirungu kana chero mutauro waunoshandisa kuti unamate, Iye anopindura chete kushoko rake. Denga nepasi zvichapfuura asi izwi rake haringatongopfuuri.
Kunamata zvakangofanana nekuisa nyaya yako pamberi pemutongi mukamuri redare, haunonoki nyaya nekuti iwe unoziva kutaura nyaya, unokunda nyaya nekuti nyaya dzako dzakatsigirwa neyakaomeswa humbowo. Ndizvo zvazvakaitawo neminyengetero. Chero chipi zvacho chauri kukumbira kuna Mwari muminamato, iwe unofanirwa kutsvaga magwaro uye uwane izwi raMwari rinoenderana nenzvimbo iyoyo yekushaiwa kwako wozviisa kuna Mwari muminamato yako. Semuenzaniso kana iwe uchinamata kuna Mwari kuti ubereke, Unomuyeuchidza Iye nezveIzwi rake munaEksodho 23:25, kuti ivo vanokushandira havazove vasingabereki, iwe unomuyeuchidzawo Iye wezwi rake munaGenesisi, kwaakaraira vanhu kuti vave berekai muwande. Kana iwe uchiyeuchidza Mwari nezveshoko rake mukati memunamato wako, urikupa nyaya yakasimba pamberi paMwari, mutongi wevose, uye sezvo Mwari vasingagoni kuramba shoko ravo, havakwanise kukuramba mhinduro dzeminamato yako.
Ndokumbirawo, musanamata musina kunyatso kudzidza izwi. Tenda Mwari neinternet mazuva ano, chero chaunoda kunamatira nezvacho, tsvagisisa mushoko zvine chekuita nenzvimbo iyoyo. Semuenzaniso kana iwe uchida kunamatira munamato wekuporesa, enda online uye tsvaga muGoogle mavhesi ebhaibheri nezvekuporesa, teedzera pasi iwo mavhesi, uverenge uye ushandise kuyeuchidza Mwari muminamato. Dzokorora Izwi raKe kwaari, Muudze, "Baba, kana mataura uye maita izvi mushoko renyu, uyai muite zvimwe chete muhupenyu hwangu muzita raJesu". Kunamata neshoko kunoita kuti minamato yako isakwanise kuregeredzwa naMwari. Ndiri kuona minamato yako yose fomu yapindurwa muzita raJesu.
Maitiro Ekutaura Kwavo Chigaro cheChigaro Chemunamato
Kune yega yega yakabudirira, pane nguva dzose kuziva sei, uye izvo zvinosanganisira munyengetero. Isu tiri kukurumidza kuenda kunenge tichitarisa nzira dzekusvika kune chigaro chekunamata.
1). Kutenda Muzita Rake.
Zvese zviri muumambo uhu zvinotanga uye zvinopera nekutenda. Pasina kutenda hazvigoneke kusvika kuna Mwari, vahebheru 11: 6. Kutenda ndiko kuvimbika kwakazara kuna Mwari. Kana isu tikanamata tichivimba chose kuna Mwari, tinoona kutendeka kwake muhupenyu hwedu. Kuti tisvike pakamuri yechigaro chekunamatira, tinofanira kuuya tichitenda, tinofanira kutenda muna Mwari uyo watinonamata kwaari. Kana tikapotsa danho rekutenda, rimwe nerimwe nhanho rinova risina basa. Kutenda kwedu kunofanira kunge kuri muzita raJesu Kristu apo tinosvikira kuatari yemunamato. Munamato wedu unofanirwa kutanga muzita raJesu, uye wopera muzita raJesu.
2). Nguva Yekutenda:
Kuvonga ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekupinda kuvapo kwaMwari. Wese munamato kuna Mwari unofanirwa kutanga nekutenda. Nguva yekutenda ndeyekutenda Mwari zvaari uye nezve izvo zvaakaita muhupenyu hwedu. Patinotenda Mwari, runako rwake runoramba ruchionga muhupenyu hwedu.
Vaheberi 4:16, inotiudza kuti tiende kuatari yemunamato takashinga. Tinofanira kushinga pamberi paMwari muminamato, Ivo ndiBaba vedu, uye vanotida nenzira dzatisingambofungidzira. Naizvozvo hatifanirwe kutya pamberi paMwari, kunyangwe kana watadza, tambira chete ngoni nenyasha dzake kuti tifambire muna Kristu. Mwari vanogara vachipindura zvikumbiro zvedu zvoushingi muzita raJesu.
4). Iva Chaizvoizvo Nezvaunokumbira:
Kunamata hakuna kukwana kusvikira tapa zvikumbiro zvedu pamberi paMwari. Munzvimbo ino, Zvakangwara kuti isu titaure muminamato yedu. Udza Mwari chaizvo zvatinoda kuti aite muhupenyu hwako. Usapopote kana kubhabhatidza, ingo enda wakananga kunongedzo, kana iwe uchida kupora, mubvunze iye kupora, kana iwe uchida njere, ingomubvunza iye njere, kana iwe uchida madhiri, ingomubvunza iye mafambiro. Iva akananga uye akajeka mukukumbira kwako.
Pasina kutarisira, kutenda kwako hakuzogari. Tarisiro iri nyore kumirira Ernestly kuti uwane mhinduro, iko kutenda Mwari kuti minyengetero yako yakapindurwa. Kutarisira ndizvo zvinobatanidza kutenda kwedu kune zvishamiso zvedu. Pamunamato wese watinonamata, tinofanirwa kutarisira mhinduro dzako. Kungotarisira kwevakarurama kuchaitika pakupedzisira. Munamato wakangofanana nekufonera shamwari yako parunhare uchimubvunza kuti auye kuhofisi yako, uye anokuudza kuti achange aripo muawa, munamato uya, asi tarisiro uri kumirira iye muhofisi mako kuti auye mukati meawa. Iwe unoona, nekuda kwekutarisira kwako, iwe uchave wakamira pachako nekuti uri kutarisira mhinduro dzako. Nenzira imwecheteyo kana isu tichinamata kuna Mwari, isu hatifanirwe kungomira paminamato, isu tinofanirwa kutarisira mhinduro dzedu nekuti avo chete vanotarisira mhinduro vanovaona. Zviri nyore kupotsa mushanyi, kana usiri kutarisira iye kana iye.
Minamato inosimudzira zviitiko zveMweya zvinosimbisa hupenyu hwedu hwekunamata. Izvi zveMweya mabasa anochengeta yedu munyengetero moto unopisa. Pazasi pane maviri makuru evanamato ekuwedzera:
Kutsanya kuri kuisa nyama kana muviri pasi pekuzviisa pasi kuitira kuti ukudziridze mweya wako kuburikidza nemunamato uye neshoko. Munguva yekutsanya, tinorega kudya, zvinwiwa uye chero chinhu chipi zvacho chingafadze nyama, kuti tigogona kutsvaga Mwari. Munamato isimba, asi kutsanya ndiyo inosimudzira mhinduro paminyengetero yako. Kureva kuti, kutsanya kunoita kuti munamato wako unyanye kutarisa uye uine simba. Kudya, kunwa uye kuona TV, zvinogona kukuvhiringidza pane dzimwe nguva, ndosaka iwe uchifanira kunge uri kupa kutsanya. Kutsanya mukati mawo pachako hakuwedzere kuhupenyu hwako hwomweya, asi kana isu tikanamata tichimhanya uye tichidzidza nekukurumidza, tinowedzera zvakanaka zvemweya zvekutsanya. Kutsanya kunogona kuitwa kweawa matatu, maawa matanhatu, maawa gumi nemaviri nezvimwewo sezvo mweya ichikutungamira. Heano mamwe mavhesi eBhaibheri ekutsanya, Mateo 3:6, Ruka 12:17, Mateo 21: 4-14, Isaya 6: 16-18.
2). Kunamata MuMweya Mutsvene
Mweya Mutsvene unotibatsira kuti tinamate zvinobudirira. Iwe unoda here kuti hupenyu hwako hwekunamatira huve pamoto? Ipapo shuwa kuzadzwa neMweya Mutsvene. Kuzadzwa ne Ho! Y Ghost kunoratidzwa nekunamata nendimi. Kana isu tikanamata nendimi, Mweya Mutsvene unonamatira kuburikidza nesu, uye zvinoenderana naJudah 1:20, ndiyo fomu yepamusoro yemunamato.
Iwo masimba anotirwisa ndewemweya, saka isu tinofanirwa kusangana nawo kubva kunzvimbo yemweya, sezvo nyama isina simba rakaringana kuibata. Ndosaka Jesu akativimbisa Mweya Mutsvene, Munyaradzi uye Mubatsiri wedu, kuti atibatsire kuyambuka nzvimbo inoenda kudenga. Kusvikira iwe uchikwanisa kuendesa rubatsiro rweMweya Mutsvene mumunamato, unogona kusamboona budiriro yechokwadi mumukristu wako. hupenyu. Nekuda kwekusimudzira hupenyu hwako hwekunamatira kusvika kumhinduro, gara uchinamata mumweya, rega Mweya Mutsvene unamate kuburikidza uye iwe uchagara uchiona kukunda kwesimba.
Ndinotenda, kuti pari zvino wave kuziva nzira yekunamata nayo munamato unoshanda, ikozvino tichave tichitarisa pane mamwe mamato emunamato Ini ndinovadaidza sampu nekuti inoshanda segwara. Tine diary rakakura remunamato pane webhusaiti yedu, saka ndichave ndichigovana newe mamwe eminamato yekunamatira newe kuti ndikwanise kugumisa kutanga rwendo rwako kuenda kumunamato unoshanda. Pazasi pane mimwe minamato yekubatsira iyo ichabatsira hupenyu hwako hwemunamato:
1). Munamato wekuporesa, Dzvanya pano
2). Munamato wekubudirira, Tinya pano
3) .Prayer Kwemhuri, Dzvanya pano
4). Munamato Nezvibereko zveWhis, Dzvanya pano
5). Munamato weVana, Dzvanya pano
6). Munamato weDziviriro, Dzvanya pano
7). Munamato weKuchinja, Dzvanya pano
8). Mangwanani Munamato, Dzvanya pano
9). Pakati pehusiku Munamato, Dzvanya pano
10). Kutsanya Uye Munamato, Dzvanya pano
11). Mimwe Minamato, Dzvanya pano
Ndinotenda izvi zvaikubatsira, nyaya yekunamata muhupenyu hwemuChristu haimbofa yakasimbiswa, munamato ndiyo tambo yehupenyu yemukristu wese. Ndinonamata kuti nyasha dzekusimba paatari yekunamatira dzigare pauri nguva dzese muzita raJesu. Ramba wakaropafadzwa.
Previous nyayaMunamato wekuporesa Kurwara Kunoshamisa Kurwara
inotevera30 Kununurwa Munamato Kubva kuMweya Wakazivikanwa
Kunamata Points YeRuponeso
Ema Chivabvu 18, 2020 nenguva dza 8:00 pm
Ndinokutendai zvikuru Man of God. Minyengetero yacho ine simba kwazvo uye inobatsira.
Pfungwa dzeMunamato Kune Hupenyu Partner
Namata Uko Rudzi rweSouth Africa
Kunamata Points Kune Mukadzi anotya Mwari
20 Mavhesi eBhaibheri nezvekubvisa nhumbu KJV